”Waa haysannaa hubka aad haysataan!” – Kenya oo ku hanjabtey inay Beled Xaawo ”weerarayso” haddii…. | Hadalsame Media
”Usha ii sii haya!” – Wasiir ka tirsan DF Somalia oo…
Home Arrimaha Caalamka ”Waa haysannaa hubka aad haysataan!” – Kenya oo ku hanjabtey inay Beled...
”Waa haysannaa hubka aad haysataan!” – Kenya oo ku hanjabtey inay Beled Xaawo ”weerarayso” haddii….
(Mandheera) 28 Abriil 2020 – Taliyaha Booliiska Gobolka Soomaalida, Nicodemus Ndalana, ayaa ka digey wax uu ku sheegay ”dulmiga Soomaalida” oo uu sheegay inaysan Kenya u dulqaadan doonin, isagoo Ciiddamada Xooga Somalia (SNA) ugu baaqay inaysan ”daandaansan” kuwa KDF.
Mr Ndalana ayaa tixraacayey war sheegayey inay Ciidanka Somalia ay hal garnayl oo laga soo tuuray qoriga RPG Seben ay soo geliyeen xafiiska maaliyadda degmada iyo meel u dhow saldhigga booliiska Mandheera, waloow ay saxaadda Kenya qirtay inay daandaansiga bilaabeen malliishiyaad ay Kenya wadato oo halkaa kusoo noqday.
“Iyaga (KDF) ayaa lagu bartilmaameedsaday RPG kasoo dhacay dhanka Somalia, waxaana jeclaan lahaa inaan iraahdo taa ma aqbalayno,” ayuu yiri Mr Ndalana oo saxaafadda la hadlay isagoo sheegay inay soo jawaabi doonaan hadda kaddib.
“Haddii ay markale na daandaansadaan KDF waxay ku khasbanaan doontaa inay dagaallamaan, waayo waan haysannaa roketyada ay soo ridayaan oo kale,” ayuu ku falax gooddiyey.
Si kastaba, taliyaha ayaa la sheegay inuu dhanka Bulla Xaawo u diray koox uu hoggaaminayo Taliyaha Ciidamada Mandheera si ay ula soo xaajoodaan maamulka Somalia ee halkaa jooga oo nabad loo gaaro.
Somalia ayaa Kenya ku eedaysay inay faragelin ku hayso gudaha Somalia, isla markaana ay naas nuujinayso ninka baxsadka ah ee Abdirashid Hassan Janan, iyadoo ay Ciidamada Somalia ku itaal roonaadeen dagaal hore oo halkaa ka dhacay.
MALLIISHIYO AY KENYA GABBAAD SIINAYSO
Shilkii ugu dambeeyey, ayaa sida ay qabaan ilo amaan oo si dhow xaaladda ula socda, waxaa u sabab ahaa oo bilaabay malliishiyaad ay Kenya taageerto, sida uu qirayo Daily Nation.
“Ciidamada Jubbaland waxay ku noqdeen halkii ay horay uga dhuumanayeen Border Point One waxayna u egtahay inay hubinayeen feejignaanta cadowgooda jooga ”xadka” dhankiisa kale,” ayay ishaasi ku tiri wargayska.
Malliishiyaadkan ayaa kaddib markii ay ka itaal roonaadeen Ciidamada Xoogga Dalka (SNA) 2-dii Maarso, waxay dib ugu gurteen Koromey oo bannaanka ka ah Mandheera, iyagoo halkaa muddo isku urursanayey, dhallinyarana ku tababarayey.
Talaadadii ayaa waxaa la arkayey ciidamadan oo iyaga oo ay gelbinayaan kuwa Kenya ee KDF, gaar ahaan unugta sahanka dheer ee Long Range Surveillance oo dhe maraya Mandheera iyagoo saldhigtay Border Point One.
Previous article”Haddaad Dallas Timaado waan ku dilayaa!” – Nin Trump u dhaartay oo la xukumay (Dallas oo xusuus xun ku leh dadka Maraykanka)
Next articleKURBADA KAROONAHA: Arrin naxdin leh oo ka taagan xabsiyada Laatiin Ameerika
(Muqdisho) 27 Okt 2020 - Wasiirka cusub ee Warfaafinta Somalia, Md Cusmaan Dubbe, ayaa ka hadlay waayo soo maray oo uu ku muujinayo inay...
Faransiiska oo iyaga oo is yara jilcinaya ka hadlay go’aanka ay ka qaateen badeecada ka imanaysa Turkiga